LG Gram fechaa | Esi m mac
Anyị nọ nso CES na Las Vegas (Consumer Electronic Show) ebe ọtụtụ n'ime ndị nrụpụta gosipụtara akụkọ ha ma ndị nta akụkọ ma ndị ọrụ na-aga ebe ahụ. Maka ndị “amaghị” anyị ga-ekwu nwa oge na ihe omume a yitere Mobile World Congress na Barcelona ebe teknụzụ na ngwa dị iche iche bụ ndị a ma ama. N'ime ihe ndị a, Apple enweghị ọnụnọ ebe ọ bụ na anyị niile maara na ụmụ okorobịa si Cupertino nwere mmemme nke ha ebe ha na-eweta ozi ha na ndị ọzọ, Apple Keynote, mana ụlọ ọrụ ndị ọzọ na-egosipụtakarị akụkọ na ihe omume a na Las Vegas na otu n’ime ndị ga-egosi ngwaahịa ha bụ LG.
N'okwu a, ụlọ ọrụ Korea achọghị ichere CES wee nye anyị ndorodoro maka MacBook nke Apple. Intobanye na uru nke otu ma ọ bụ nke ọzọ nwere ike ịbụ ihe anyị na-ekwenyeghi na ọ ga-akwụsị, ebe ọ bụ na esemokwu dị iche iche na-apụta ìhè n'ezie, mana ọ bụrụ na anyị eleba anya na ịdị arọ na ọ bụ na ụdị ọhụrụ a nke usoro ahụ LG Gram, naanị jiri 980 gram ọbụna na ihuenyo 15,6-inch. Ọwọrọ Apple kacha gbaa ọkụ MacBook bụ 12-anụ ọhịa ma dịrị 92og, nke pụtara na ọ dịkarịa ala na nkọwa nke ibu, LG arụwo ọrụ pụrụ iche na laptọọpụ ọhụrụ a.
N'aka nke ọzọ, na mgbakwunye na iti Apple's Macs, LG na-etikwa ụfọdụ n'ime ndị na-agba ya aka mgba, dị ka nke Lenovo na nke kachasị dị na 980g mana yana ya na ihuenyo 13-inch, yabụ O yighị ka ọ nwere onye na-ama ya aka ugbu a nke na-akụ ya n'anya na ngebichi. LG Gram nwere nsụgharị abụọ na Intel Skylake i5 ma ọ bụ i7 processor, ọnụọgụ ahụ igodo, ọdụ USB C na HDMI, o doro anya na OS bụ Windows 10. Batrị nke laptọọpụ ọhụrụ a ga-egosi na CES 2016 yana dịka onye nrụpụta In ikpe a ọ ga-akarị nke MacBook nyere, ebe LG na-ekwu maka ihe dịka 7 ma ọ bụ 7,30 iji mee ihe maka LG Gram a.
na gara aga nsụgharị nke a LG Gram nlereanya ugbua chere ihu ugbu a Apple MacBook Ikuku na na imewe ọ bụ ezie na ọ bụ eziokwu na ha bụ ndị yiri, ọtụtụ n'ime reviews kwuru mma imewe, risịrị na arụmọrụ nke MacBook Ikuku, n'agbanyeghị nke ahụ yiri "ke akpa ilekiri" n'etiti ma ụdị.
Naanị ụnyaahụ anyị na onye mụ na ya na-ekwurịta okwu bụ Pedro banyere ịdị arọ nke Apple's MacBook Pros ma ọ bụrụ na ụlọ ọrụ ahụ nwere ike ịgbalị belata ya. O doro anya na e nwere MacBook Air ma ọ bụ MacBook, nke ka njọ ma ọ bụrụ na anyị chọrọ atụmatụ ndị dị ike karị, anyị ga-aga maka Pro na nke a n'agbanyeghị na anyị dị ezigbo ọkụ, n'ihe banyere ụdị 15-inch anyị na-aga 2kg nke ibu.
O doro m anya na mụ onwe m agaghị azụta laptọọpụ nke na-abụghị Mac taa, n'agbanyeghị "ọnụọgụ na uru" ha na-ere anyị na laptọọpụ ugbu a ejirila m Mac. kọmputa site n'otu akụkụ gaa na nke ọzọ nwere ike ịbụ a na-ekpebi ihe na-eme n'ọdịnihu nke Mac, dị nnọọ ka ọ na-adị ugbu a smartphones na-aghọ esiwanye Mkpa ọkụ na nke a nwere ike ịbụ ihe na-eme ka a mata na ndị na-esonụ ọgbọ nke MacBook Pro, ugbua na Airs ma ọ bụ MacBooks bụ n'ezie ìhè n'oge a, mana nha ihuenyo bụ ihe ị ga-atụle.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » LG gram, laptọọpụ fechaa LG
O doro m anya na mụ onwe m agaghị azụta laptọọpụ nke na-abụghị Mac taa, n'agbanyeghị "ọnụọgụ na uru" ha na-ere anyị na laptọọpụ ugbu a ejiri m Mac
Ihe ọ na-efu m maara na Mac ...